အမေရိကန်တို့ အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆူလေမန်နီကို MQ-9 REAPER ဒရုန်းဖြင့် လုပ်ကြံခဲ့စဉ်က | CeleTrend
အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေက အီရန် ထိပ်တန်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆူလေမန်နီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုမှာ တိကျသေချာတဲ့ သတင်းပေးတွေ၊အီလက်ထရွန်နစ်ကြားဖြတ် ကရိယာတွေ၊ ကင်းထောက် စောင့်ကြည့် ထောက်လှမ်းရေးလေယာဉ်တွေ ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် အငြိမ်းစားထောက်လှမ်းရေး တပ်မှူးကြီးတစ်ဦးက ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းတွေက ဖော်ပြထား ပါတယ်။အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆူလေ မန်နီဟာ ကြာသပတေးနေ့ညက အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မှ ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး ဘဂ္ဂဒက်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက် လာရောက် ကြိုဆိုနေတဲ့ အီရတ် PMF စစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦးနဲ့ အတူ ကားနှစ်စီးနဲ့ ထွက်ခွာလာခါစ လေဆိပ် ကာဂို ဧရိယာအနီး (မမြင်နိုင်တဲ့ ကောင်းကင်အမြင့်ပေ ၅ဝဝဝဝခန့်ထိ ပျံသန်းနေတဲ့) MQ-9 Reaper တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်း နှစ်စင်းက ပစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ လေဆာလမ်းညွှန် ပဲ့ထိန်းဒုံးတွေရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သေဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူလေမန်နီ သေဆုံးကြောင်းကို သူ့ရဲ့ လက်မှာ အမြဲစွပ်ထားလေ့ရှိတဲ့ လက်စွပ်ပါ လက်ပြတ်ကိုကြည့်ပြီး အတည်ပြုခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီလို ရန်သူ့ အရေးကြီး တန်ဘိုးမြင့် ပစ်မှတ် (HVT) ကို ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ အတွက် အစ္စရေး ထောက်လှမ်းရေး မော့ဆက် ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းကြီးလျက် ရှိပေမယ့် လုပ်ကြံခဲ့တာဟာ အစ္စရေးရဲ့ လက်ရာ မဟုတ်။
Burning debris are seen onaroad near Baghdad International Airport, which according to Iraqi paramilitary groups were caused by three rockets hitting the airport in Iraq, January 3, 2020, in this image obtained via social media. Iraqi Security Media Cell via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY
အမေရိကန် စတိုင်လ်သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အီရတ် နိုင်ငံအတွင်းမှာ ယခုလို စစ်ဆင်ရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ MQ-9 Reaper တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းတွေ ဖြန့်ကြက်ထားတဲ့ လေတပ် အခြေချ စခန်း မရှိပါဘူး။ဘဂ္ဂဒက်မြို့နဲ့အနီးဆုံး လေတပ် အခြေချ စခန်း ၃ခု ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ Ali al-Salem airbase လေတပ်စခန်း၊ ကာတာနိုင်ငံက al Udeid airbase လေတပ်စခန်း၊ ယူအေအီးနိုင်ငံရှိ Al Dafra airbase လေတပ် အခြေချစခန်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ Ali al-Salem airbase ဟာ လူသိနည်းတဲ့တိတ်တိတ်ပုန်း လေတပ်စခန်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဘဂ္ဂဒက်လေဆိပ်နဲ့ ၆၆၂ ကီလိုမီတာ (၄၁၃ မိုင်ခန့်သာ) ကွာဝေးတာမို့တစ်နာရီလျင် မိုင် ၃၀၀ နှုန်းနဲ့ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ MQ-9 Reaper ဒရုန်းဟာ တစ်နာရီခွဲတောင် မမောင်းရပဲ ဘဂ္ဂဒက်လေဆိပ်အနီးက ကောင်းကင်ယံမှာ ယောင်ပေပေ ဝဲပျံပြီး ပစ်မှတ်အတည်ပြုချက်ကို စောင့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MQ-9 Reaper တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနေတဲ့ Honeywell TPE331- 10 turbopropအင်ဂျင်ဟာ ဆီစားနှုန်း သက်သာတဲ့အတွက် ကောင်းကင်မှာ ဝန်အပြည့်နဲ့ ၁၄နာရီကြာအောင် ပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အင်ဂျင်စက်သံဟာ ဆူညံမှု အလွန် နည်းတဲ့အတွက် ရန်သူ့ နယ်မြေထဲကို တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်ရန်အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ပေ ၅၀၀၀၀(၁ဝမိုင်)နီးပါး ပျံသန်းပြီး AGM-114 Hellfireမစ်ဇိုင်း ကို ၆.၈မိုင်အကွာမှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း ရှိတာကြောင့် ယခုလို မြေပြင်နဲ့ ဂြိုဟ်တု ထောက်လှမ်းရေး စနစ်များ၊ ထောက်လှမ်းရေးလေယာဉ်များရဲ့ အကူအညီ ကွန်ယက်ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချ နိုင်တဲ့ အနေအထားအရ ရန်သူ့ပစ်မှတ်ကို အောင်မြင်စွာ ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမရေိကနျတိုကျခိုကျရေးဒရုနျးတှကေ အီရနျ ထိပျတနျး ဗိုလျခြုပျကွီး ဆူလမေနျနီကို လုပျကွံသတျဖွတျမှုမှာ တိကသြခြောတဲ့ သတငျးပေးတှေ၊အီလကျထရှနျနဈကွားဖွတျ ကရိယာတှေ၊ကငျးထောကျ စောငျ့ကွညျ့ ထောကျလှမျးရေးလယောဉျတှေ ပူးပေါငျး စဈဆငျခဲ့ကွောငျး အမရေိကနျ အငွိမျးစားထောကျလှမျးရေး တပျမှူးကွီးတဈဦးက ပွောဆိုခဲ့ကွောငျး နယူးယောကျတိုငျးမျ သတငျးတှကေ ဖျောပွထား ပါတယျ။အီရနျဗိုလျခြုပျကွီး ဆူလေ မနျနီဟာ ကွာသပတေးနညေ့က အီရနျနိုငျငံ တီဟီရနျမှ ထှကျခှာလာခဲ့ပွီး ဘဂ်ဂဒကျလဆေိပျသို့ ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ဒီနောကျ လာရောကျ ကွိုဆိုနတေဲ့ အီရတျ PMF စဈခေါငျးဆောငျဗိုလျခြုပျကွီး တဈဦးနဲ့ အတူ ကားနှဈစီးနဲ့ ထှကျခှာလာခါစ လဆေိပျ ကာဂို ဧရိယာအနီး (မမွငျနိုငျတဲ့ ကောငျးကငျအမွငျ့ပေ ၅ဝဝဝဝခနျ့ထိ ပြံသနျးနတေဲ့) MQ-9 Reaper တိုကျခိုကျရေးဒရုနျး နှဈစငျးက ပဈလှတျခဲ့တဲ့ လဆောလမျးညှနျ ပဲ့ထိနျးဒုံးတှရေဲ့ ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ ရုပျပကျြဆငျးပကျြ သဆေုံးသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။အီရနျဗိုလျခြုပျကွီးဆူလမေနျနီ သဆေုံးကွောငျးကို သူ့ရဲ့ လကျမှာ အမွဲစှပျထားလရှေိ့တဲ့ လကျစှပျပါ လကျပွတျကိုကွညျ့ပွီး အတညျပွုခဲ့ ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ဒီလို ရနျသူ့ အရေးကွီး တနျဘိုးမွငျ့ ပဈမှတျ (HVT) ကို ခမြှေုနျးနိုငျဖို့ အတှကျ အစ်စရေး ထောကျလှမျးရေး မော့ဆကျ ပါဝငျခဲ့တယျလို့ သတငျးကွီးလကျြ ရှိပမေယျ့ လုပျကွံခဲ့တာဟာ အစ်စရေးရဲ့ လကျရာ မဟုတျ။
အမရေိကနျ စတိုငျလျသကျသကျသာ ဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ အီရတျ နိုငျငံအတှငျးမှာ ယခုလို စဈဆငျရေးအတှကျ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ MQ-9 Reaper တိုကျခိုကျရေး ဒရုနျးတှေ ဖွနျ့ကွကျထားတဲ့ လတေပျ အခွခြေ စခနျး မရှိပါဘူး။ဘဂ်ဂဒကျမွို့နဲ့အနီးဆုံး လတေပျ အခွခြေ စခနျး ၃ခု ရှိပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့မှာကူဝိတျနိုငျငံရှိ Ali al-Salem airbase လတေပျစခနျး၊ ကာတာနိုငျငံက al Udeid airbase လတေပျစခနျး၊ ယူအအေီးနိုငျငံရှိ Al Dafra airbase လတေပျ အခွခေစြခနျးတို့ ဖွဈပါတယျ။ကူဝိတျနိုငျငံရှိ Ali al-Salem airbase ဟာ လူသိနညျးတဲ့တိတျတိတျပုနျး လတေပျစခနျး တဈခု ဖွဈပွီး ဘဂ်ဂဒကျလဆေိပျနဲ့ ၆၆၂ ကီလိုမီတာ (၄၁၃ မိုငျခနျ့သာ) ကှာဝေးတာမို့တဈနာရီလငျြ မိုငျ ၃၀၀ နှုနျးနဲ့ ပြံသနျးနိုငျတဲ့ MQ-9 Reaper ဒရုနျးဟာ တဈနာရီခှဲတောငျ မမောငျးရပဲ ဘဂ်ဂဒကျလဆေိပျအနီးက ကောငျးကငျယံမှာ ယောငျပပေေ ဝဲပြံပွီး ပဈမှတျအတညျပွုခကျြကို စောငျ့နမှော ဖွဈပါတယျ။
MQ-9 Reaper တိုကျခိုကျရေးဒရုနျးတှမှော တပျဆငျအသုံးပွုနတေဲ့ Honeywell TPE331- 10 turbopropအငျဂငျြဟာ ဆီစားနှုနျး သကျသာတဲ့အတှကျ ကောငျးကငျမှာ ဝနျအပွညျ့နဲ့ ၁၄နာရီကွာအောငျ ပြံသနျးနိုငျပါတယျ။ဒါ့အပွငျ အငျဂငျြစကျသံဟာ ဆူညံမှု အလှနျ နညျးတဲ့အတှကျ ရနျသူ့ နယျမွထေဲကို တိတျတဆိတျ ဝငျရောကျရနျအဆငျပွစေမှော ဖွဈပါတယျ။အမွငျ့ပေ ၅၀၀၀၀(၁ဝမိုငျ)နီးပါး ပြံသနျးပွီး AGM-114 Hellfireမဈဇိုငျး ကို ၆.၈မိုငျအကှာမှ ပဈခတျတိုကျခိုကျနိုငျစှမျး ရှိတာကွောငျ့ ယခုလို မွပွေငျနဲ့ ဂွိုဟျတု ထောကျလှမျးရေး စနဈမြား၊ ထောကျလှမျးရေးလယောဉျမြားရဲ့ အကူအညီ ကှနျယကျကို မှနျကနျစှာ အသုံးခြ နိုငျတဲ့ အနအေထားအရ ရနျသူ့ပဈမှတျကို အောငျမွငျစှာ ခမြှေုနျးနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။